Michael KorsMK6113 Channing အမျိုးသမီးဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်နှင့်ငွေရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး Kaymu စတိုး Kaymu ဖက်ရှင် Kaymu အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး Kaymu ဖုန်းများ Kaymu တက်ဘလက်များ Kaymu ကွန်ပြူတာများ Kaymu ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Kaymu ကင်မရာများ Kaymu ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ Kaymu အိမ်သုံးပစ္စည်းများ Kaymu စားသောက်ကုန်များ Kaymu ကားပစ္စည်းများ Kaymu အားကစားပစ္စည်းများ Kaymu ကလေးများအတွက် Kaymu ဘာသာရေးပစ္စည်းများ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NOBODY OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER MICHAEL KORS WOMEN'SECRET GUESS SPRINGFIELD VKK YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S THE BALM E.L.F COREANA ဖုန်းများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ (၈"အောက်) တက်ဘလက်များ (၈"နှင့်အထက်) ၀ိုင်ဖိုင်ကွန်ယက် ဖုန်းကွန်ယက် iPadများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အခြားပစ္စည်းများ TOP BRANDS APPLE SAMSUNG XIAOMI ACER WAINFORD ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ ကလေးများအတွက် အသုံးအဆောင်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ အားကစားပစ္စည်းများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်များ နာရီများ Michael Kors MK6113 Channing အမျိုးသမီးဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်နှင့်ငွေရောင် Michael Kors MK6113 Channing အမျိုးသမီးဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်နှင့်ငွေရောင်By Michael Kors (2) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > Ks 378,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ Mobile & Watch Club ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်း5မှတ် (1)4 မှတ် (1)3 မှတ် (0)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 4,52 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် မှတ်ချက်အားလုံးMay Hnin Phyu2016 ဇူလိုငျ 26 Michael KorsMichael Kors တံဆိပ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြောစရာမလိုလောက်အောင် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဒီဇိုင်းလည်းဆန်းပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Michael Kors ကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးတွင် လူကြိုက်များလျက်ရှိသည့် international brand တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ Michael Kors နာရီများကို နေရာဒေသမရွေး၊ လူမျိုးမရွေးဝတ်ဆင်နိုင်ရန် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဂန္တ၀င်ဆန်သည့်အသွင်နှင့် ခေတ်မီရေပန်းစားနေသည့်အသွင်တို့ကို ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသဖြင့် Michael Kors နာရီများသည် ရာသီအချိန်အခါမရွေး ၀တ်ဆင်ရန်သင့်တော်ပြီး အစဉ်အမြဲခေတ်မီသည့်အသွင်ကို ပေးနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်မှအစ ဂရုတစိုက်ဖြင့် သေသပ်စွာထုတ်လုပ်ထားခြင်းမှာ Michael Kors နာရီများ၏ တစ်မူထူးခြားသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Michael Kors နာရီများကို ခေတ်မီဆန်းသစ်သည့် အ၀တ်အစားများ၊ လက်ကိုင်အိတ်များ အစရှိသည်တို့နှင့် လိုက်ဖက်စွာတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ရန် အထူးစီမံဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားပါသည်။Michael Kors သည် နယူးယောက်ရှိ နာမည်ကြီး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်၏ အမည်ကိုအစွဲပြု၍ ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာ Michael Kors က ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ခေတ်စားနေသော ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများကို လက်ရာပြောင်မြောက်စွာ ရေးဆွဲလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ဆုတံဆိပ်များ ရရှိထားသည့် ဖက်ရှင်ပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ Michael Kors က ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ယင်းအမည်ဖြင့် ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်တွင် Michael Kors အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ Michael Kors မှ သင့်ပင်ကိုယ်အလှကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေမည့် accessory များ၊ ဖိနပ်၊ နာရီ၊ အ၀တ်အထည်၊ မျက်မှန်နှင့် ရေမွှေးအမျိုးမျိုးတို့ကို ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းအမျိုးအမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလျက်ရှိသည်။ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းတွင် နာမည်ကြီးသည့် ဒီဇိုင်းနာ Michael Kors သည် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသည့် ပါရမီရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်တော်လုပ်ကိုင်စဉ်မှစ၍ ခေတ်မီဆန်းသစ်ပြီး အများကငေးမောရသည့် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Michael Kors မှ ထုတ်လုပ်သော နာရီနှင့် အခြားအသုံးအဆောင်များသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ဆန်းသစ်လှပသည့်အပြင် အချိန်ကာလမည်မျှပင် ကြာညောင်းစေကာမူ မှေးမှိန်မသွားသည့် ဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။ Michael Kors သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး ယင်း၏ ခေတ်မီဆန်းသစ်ပြီး တည်ငြိမ်လှပသည့် ဒီဇိုင်းများကြောင့် သုံးစွဲသူများအကြား ရေပန်းအစားဆုံး အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ဈေးကွက်တွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။Michael Kors အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်များ ကမ္ဘာကျော်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ယင်း၏ အစဉ်အမြဲဆန်းသစ်နေသည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် အသစ်အသစ်သော တီထွင်ဖန်တီးမှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာ Michael Kors က ယခင်ကတည်းကခေတ်စားသည့် ရိုးရှင်းပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်သော နာရီဒီဇိုင်းများကို ခေတ်မီဆန်းသစ်သည့် ယနေ့ခေတ်ဖက်ရှင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ဈေးကွက်တွင် လူကြိုက်များ ကျော်ကြားလျက်ရှိသည်။ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးဝတ်ဆင်ရန် သင့်တော်သည့် Michael Kors နာရီများက သင့်ကို ခေတ်နှင့်အညီ ဖက်ရှင်ကျလှပနေစေမည်ဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်လှပသည့် Michael Kors နာရီများကို ရွေးချယ်ခြင်းက သင်၏ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ကို လူကြားထဲတွင် ထင်ပေါ်လှပနေစေမည်ဖြစ်သည်။အဓိက အကြောင်းအရာများPrecision, Comfort and Convenience - Perfect gift for any occasionJapanese quartz movement with analog display and mineral crystal dial windowStainless steel bracelet and case with black dialWater resistant to 10 ATM / 100 meters / 330 feet : suitable for snorkeling as well as swimming, but not divingTwo-Year WarrantyAdditional shipping fees will be chargedကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် MK6113 Channing အမျိုးသမီးဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်နှင့်ငွေရောင် SKUMI400FAAAF70NAFAMZ မော်ဒယ်လ်MK6113 Weight (kg)0.2 ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေလျှင် ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသလား? ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူပြီး အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတရာ ရှိပါက သင်လက်ခံရရှိသောနေ့မှ စ၍ ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပြီး ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။